भोलिसम्ममा मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी, कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय पाउने ? - Thulo khabar
भोलिसम्ममा मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी, कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय पाउने ?
काठमाडौँ, असोज १९–
सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएसंगै मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिने अन्तिम तयारी छ ।
भोलि (बुधबार)सम्ममा पूर्णता दिने गरी गठबन्धनका चार घटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीबीच मन्त्रालयको भागबण्डा पनि लगभग सकिएको छ । आज बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच बसेको बैठकमा कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेबारे मोटामोटी सहमति भएको छ।
स्रोतका कांग्रेसले अब सञ्चार, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लिने भएको छ। कांग्रेसले यसअघि गृह, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालय र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पनि लिइसकेको छ ।
यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अब भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय लिने सहमति छ। माओवादीले अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री पठाइसकेको छ।
त्यस्तै नेकपा (एमाले)बाट फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले रक्षा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिने सहमति छ।
यसैगरि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लिने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच आज छलफल भएको थियो।